स्पाम सुरक्षा: Semalt बाट गाइड
धेरै ईमेलहरूमा तिनीहरूको फोल्डरहरूमा स्पाम सन्देशहरू हुन्छन्। विश्वसनीय स्रोतहरूबाट ती स्प्याम ईमेलहरू फरक पार्दै प्रत्येक उपयोगकर्ताको लागि महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो।
स्पाम ईमेलहरूमा हानिकारक ट्रोजान हुन सक्छ वा अन्य कार्यहरू गर्न चाहान्छ, जसले पीडितलाई भ्रामक कल-टु-एक्शन कार्य प्रदर्शन गर्दछ। स्पामर्सले तपाईंको कम्प्युटरमा पहुँच प्राप्त गर्दछ र विज्ञापनहरूका ईमेलहरू पठाउँदछ जुन तपाईं हेर्न चाहानु हुन्न। केहि अवस्थाहरूमा, स्प्यामरहरू कम्प्युटर नेटवर्क प्रणालीमा होगिंगमा सफल हुन सक्छन्। यस प्रभावले तिनीहरूलाई तपाईंको विश्वसनीय ईमेलहरूमा पहुँच दिन सक्दछ, जसले उनीहरूलाई वैध व्यक्तिको रूपमा पोज गर्न सक्छ। अन्य केसहरूमा, स्प्यामरले अश्लील सामग्री सहित बच्चाहरूलाई अनुपयुक्त सामग्री पठाउन सक्दछ।
अनलाइन काम गर्ने व्यक्तिको लागि स्प्यामबाट टाढा रहनु आवश्यक छ। टाढा रहन वा स्पाम स्क्यान गर्न, Semalt बाट विशेषज्ञ लिसा मिशेलले तपाईंलाई निम्न उपायहरू सुझाव दिन्छ।
१. स्प्याम फिल्टरि software सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्
त्यहाँ केहि एन्टी-स्प्याम सफ्टवेयर समाधानहरू छन्, जसले अज्ञात प्रयोगकर्ताहरूबाट स्पाम सामग्री ब्लक गर्न प्रयोग गर्दछ। यी फिल्टरहरूले आगमन सन्देशहरू स्क्यान र पत्ता लगाउँदछ। सफ्टवेयरले ईमेलहरू रोक्न सक्दछ, जसमा स्प्याम हुन्छ र वैधलाई अनुमति दिन्छ। यी अवरुद्ध सफ्टवेयर स्थापना तपाइँको वेबसाइट को स्थिरता मा एक लाभदायक प्रभाव हुन सक्छ साथ साथै तपाइँको एसईओ प्रयास को केहि बृद्धि।
२. डिस्पोजेबल ईमेल ठेगाना राख्नुहोस्
कार्य ईमेल वा ब्लग ईमेलका साथ व्यक्तिको लागि, यो एक नि: शुल्क काम ईमेल प्रयोग गर्न आवश्यक छ। स्प्यामरहरू नेटवर्क अपहरण गर्न र वेबसाइटमा ईमेलहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस अवस्थामा, तिनीहरूले सन्देशहरू पठाउन सक्दछन् जसले ईमेलमा स्पाम समावेश गर्दछ जसले कसैको जानकारीलाई असर गर्दैन। स्पामर्सले रणनीतिहरू जस्तै लोभिंग, विज्ञापनहरू, र फ्रीबिजहरू प्रयोग गर्दछ जसले शिकारलाई सजिलैसँग लोभ्याउन सक्छ।
A. स्प्याम ईमेलमा लिंक क्लिक नगर्नुहोस्
यी लिंकहरूले हानिकारक कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छन् जस्तै SQL ईन्जेक्शन वा मालिसियस ह्याक्सको लागि तपाइँको ब्राउजरलाई हुक गर्ने। अन्य केसहरूमा, यी लि links्कहरूले स्मार्टफोनहरूमा कोडहरू डायल गर्न सक्दछन् उनीहरूलाई टाढाको कारखाना रिसेट जस्ता कार्यहरू प्रदर्शन गर्न।
Ter. फिल्टर विश्वसनीय र शंकास्पद SEO उपकरणहरू
इन्टरनेट मार्केटि ofको सुरुवातसँगै, स्प्यामर्ससँग प्रभावकारी एसईओ टेक्निकका साथै धेरै उपकरणहरू छन्। उनीहरूसँग प्राय: जसो सामान्य इन्टरनेट मार्केटिंग विधिहरू जस्तै उनीहरूका धेरै प्रक्रियाहरू स्वचालित गर्नमा धेरै सफलता हुन्छ। स्पामर्ससँग स्वचालन उपकरणहरू छन् जसले तिनीहरूलाई हजारौं मान्य ईमेल ठेगानाहरू स्कूप गर्न मद्दत गर्दछ।
Spam. स्पाम ईमेलहरूमा संलग्नकहरू न खोल्नुहोस्
ट्रोजानबाट आक्रमण प्राप्त गर्नका लागि सब भन्दा सजिलो तरिका मध्ये एक टोन्जेन्स समावेश भएको एट्याच्मेन्टहरू खोल्नु हो। यी ह्याकर-उत्पादित उपकरणहरू हुन् जुनसँग विशिष्ट कार्यहरू हुन्छन् जुन उनीहरूले पीडितको कम्प्युटरमा प्रदर्शन गर्छन्। स्प्यामरहरू प्रयोग गर्ने एउटा साधारण तरिका मेलमा कागजात फाईलको रूपमा सूचि, क्याटलग वा कार्ट जानकारी पठाउँदै छ।
प्रत्येक व्यक्ति, जसले पीसी वा मोबाइल फोन इन्टरनेट पहुँच गर्न प्रयोग गर्दछ, स्प्यामको विषय हो। स्पाम ईमेलहरू उनीहरूको लक्ष्यमा दुर्भावनापूर्ण बिरामी मनसाय भएका ह्याकर्सबाट आएका हुन्। जोखिम र पीडितको अज्ञानतामा निर्भर गर्दै, यी ईमेलहरूले सम्पूर्ण इनबक्सलाई उपनिवेश गर्न सक्छन्। तिनीहरूले वेबसाइटहरू काम गर्ने तरीकालाई प्रभावित गर्न सक्दछन् र अन्तमा प्रयोगकर्ताबाट चोरी गर्दछन्। स्प्यामबाट टाढा रहनु महत्त्वपूर्ण छ। स्पामले कम्पनीलाई नोक्सान भोग्ने मात्र होइन वेबसाइट तल ल्याउने पनि बनाउन सक्छ। तपाईं यी दिशानिर्देशहरू प्रयोग गरेर स्पाम आक्रमणहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ। अन्य मामिलाहरूमा, तपाईं एउटा दुर्भावनापूर्ण ईमेल पत्ता लगाउन र यसलाई बेवास्ता गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, स्प्यामरलाई तपाईंको ईमेलमा छोड्नुहोस्।